Nooca cusub ee watchOS, AirTags, TV Remote oo laga saaray iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Axadda ayaa timid ka dib dhammaadkii wiiggii iyo Jimcihii oo si dar dar leh u socda Imaatinka iPhone 12 cusub, iPhone 12 Pro iyo jiilka afaraad iPad Air gacanta kumanaan isticmaale oo heystay qalabkan Apple.
Dareenkan, wararka ku saabsan warbaahinta la xiriirta waxay muujiyeen dhowr faallooyin iyo sanduuqyo dhowr maalmood kahor imaatinkooda rasmiga ah ee rasmiga ah, hadda waa la heli karaa laakiin saamigu aad uma fiicna xilligan, waan arki doonaa sida uu u socdo. Dhinaca kale, moodooyinka iPhone 12 Pro Max ee bilaabi doona in la xajiyo Jimcaha, Nofeembar 6, ayaan wali imaan. Inta tani dhacdo waan sii wadaynaa inta kale Akhbaarta muuqaalka leh ee aan ka imid Mac toddobaadkan.
Waxaan ku bilownay wararka ku saabsan cusbooneysiinta ay Apple soo saartay ee loogu talagalay Apple Watch Series 3. Waana taas bilowga usbuuca nooca 7.0.3 ayaa yimid si loo xaliyo dhibaatada leh moodalkan gaarka ah ee saacadda casriga ah.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee usbuuca waxaa loola jeedaa fikradda AirTags ee aan aragnay maalmo ka hor. Waxaan dhexda ugu jirnaa warar badan oo xan ah oo ku saabsan suurtagalnimada imaatinka Apple AirTags fikraddan iyaga ka mid ahna nama niyad jabayso. Miyaad jeceshahay inay sidan noqdaan?
Codsiga Remote-ka Apple TV waxaa laga saaray keydka barnaamijka Apple ka dib noocyadii ugu dambeeyay ee iOS iyo iPadOS waxay ku daraan taageerada fog ee TV-ga Apple TV. Abka lama cusbooneysiin muddo dheer hadana waxay umuuqataa in hada la heli karin.
Apple waxay dooneysaa inay wax soo saar badan ku sameyso Mareykanka si ay u qanciso Donald Trump, laakiin taa badalkeeda waxay dooneysaa in la dhimo canshuuraha ay tahay inay ka bixiyaan dalka. Dagaalku miiska ayuu saarnaa muddo dheer oo kolba waqtiga ka dambeeya war ayaa ka soo baxa, kiiskan Apple wax yar ayey ka adkeysaa dowladda dalka arrintan Waxyaabo kale ayaa ah in wax ugu dambeyn ay dhacaan ama Trump uu wax yar ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Nooca cusub ee watchOS, AirTags, TV Remote oo laga saaray iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac